Crittercism: Nyochaa Ngwaọrụ Mobile | Martech Zone
Nnyocha bụ a njikwa ngwa ngwa ekwentị ikpo okwu iji nyochaa, dozie, dozie nsogbu, ma na-eme arụmọrụ ngwa mkpanaka gị. Crittercism na-enye a ezigbo oge zuru ụwa ọnụ echiche nke ngwa nchọpụta nsogbu na ngwa njehie gafee iOS, A gam akporo, Windows Phone 8, ngwakọ na HTML5 apps nlekota 1 ijeri kwa ọnwa ọrụ n'ọrụ.
Crittercism na-enyocha ihe karịrị 500 nde ngwa, na-enyocha ihe karịrị ngwa ngwa ngwa 100, nke sụgharịrị n'ime ihe 30,000 kwa elekere na ọtụtụ puku ndị ahịa na-arụsi ọrụ ike. Atụmatụ gụnyere:
Otutu OS na Ngwaọrụ Nkwado - iOS, Android, HTML5, Windows Phone, ma ọ bụ ngwa ngwakọ
Ezigbo ‑ oge Nnukwu data - ijeri azụmahịa atọ kwa ụbọchị na-agụta na ezigbo nghọta.
Ma ọkwa & Akụkọ Notma Ọkwa - nyochaa ezigbo ngwa ngwa ngwa ngwa. Debe taabụ na ngwa gị na-emezi ka oge na-aga.
Security RBAC, Nche data - data echedoro yana njirimara onye ọrụ na-enweghị nchebe obfuscated.
Nnweta & Performance Monitoring - nyochaa ma nye SLA maka ịrụ ọrụ n'elu ikpo okwu.
Wuru maka n'ọtụtụ - site na ụlọ ahịa mmepe nọọrọ onwe ya na nnukwu ụlọ ọrụ mba ofesi.
Tags: androidngwanlekota oru nnwetanlekota oruarụmọrụ ngwanlekota oru arụmọrụịkatọNche dataHTML5 ngwangwakọiosmobile ngwanjikwa ngwa ngwa ekwentịNchekwa RBACWindows 8 Windows Phone